Europe ee Best Suuqyada Christmas By tareenka | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Europe ee Best Suuqyada Christmas By tareenka
Christmas Suuqyada by tareen kaa caawinaysaa in aad hesho galay ruuxa Christmas la safar mid ka mid ah magaalooyinka ugu fiican Yurub. Safarka tareen oo aad waayo-aragnimo ugu abid sixir! Dad badan oo saldhigyada ku yaalaan qalbiga bartamaha magaalada, samaynta safarka tareen habka ugu fudud ee ay u gaaraan meesha aad u socoto. Haddii aad u socotaan si ay u dukaameystaan ​​hadiyadaha qoyska, muunad ah khamri mulled, ama si fudud u ku raaxaystaan ​​jawiga Christmas la kuwa aad jeceshahay, aad hubto in ay la ilaawi karin ah fasaxa. Waxaan soo ururiyey dhowr ka mid ah suuqyada ugu wanaagsan ee Christmas Europe ee tareen in aad u baahan doontaa in uu seegi.
Mid ka mid ah wakhtiyada ugu sixir ah ee sanadka si aad u booqato Italy waa inta lagu guda jiro waqti Christmas. Qaadataa in Tareenku Florence, oo arka taxadiri qadiimiga iftiimiyey la nalalka Christmas iyo urin tallow galidda ee hawada.
Naples si Tareenadu Florence
post A wadaago by ⓒⓗⓘⓒⓐⓢenvoyage (@chicasenvoyage)
suuqa A caan ah si ay booqo ee Florence waa Piazza Santa Croce ee Florence. Tani waxaa ka buuxa oo xero quruxsan alwaax iyo waxaa lagu yaqaan in ay suuqa German Christmas dhaqameed. Piazza Santa Croce waa meel ku fiican in ay qaado hadiyad gaar ah iyo macaanayd degaanka.
Calaamadee bilowgii of this Suuqyada Christmas by tareenka la safarka tareenka si ay u London a. London waxaa ka buuxa Kalsoonaada Christmas ka November in January. Booqo London ee Ihmemaa jiilaalka ee Hyde Park oo waxaan arki doonaa geedaha lagu qurxiyey nalalka cirfiid, ballaadhan skiing dibadda dhib, wheel Ferris a, Oo nimankii gabayaaga ahaa Carol iyo si ka badan gudahood suuqa. Waxaa jira suuqyo badan oo yar yar si ay u doortaan ka History National London ee Museum halkaas oo aad u kululaan karaa in ay jiilaalka tegayo hawada la galaas oo glühwein iyo qaar ka mid ah cuntada oo iidaya. Plus, la fantastic tikidhada tareenka London, waxaad u baahan doontaa qaar ka mid ah kaydka dheeraad ah waayo, shopping more!
U safraan sixray suuqyada Christmas tareen!! Berlin waa fudud loo heli karo by tareenka ee Europe taas oo ka dhigaysa waxay ku caga kaamil ah. Baro caasimada Jarmalka ee taariikhda hodanka ah oo soo jiidasho leh, iyo sidoo kale suuqyada Christmas kala duwan ay, la xilliyeedka fiican shopping, dhacdooyinka, iyo badali lahaa!
Qoraal ay wadaagaan Louise Liljestrand (@louiseliljestrand)
Gendarmenmarkt waa waajib in la arko! Mudanayaasha Tan waxaa loo aqoonsan yahay mid ka mid ah picturesque ugu suuqyada Christmas Berlin ee. Dhadhamiya qaar ka mid ah kuula dhaqmo degaanka sida Gingerbread, tallow dubay, khamri mulled, iyo bolse ugu dambayn waayo-aragnimo Jarmal Christmas.
Marka la barbardhigo qaar ka mid ah suuqyada waaweyn ee guud ahaan Yurub, the Prague Christmas Markets by Train offers more authenticity and comfort. suuqa kasta wuxuu leeyahay jawi aan la ilaawi karin. Minutes ka saldhigga tareen dhexe iska yihiin oo dhalaalaysa qurxiyey buulasha alwaax on square Old Town Prague ee. Halkan dadka deegaanka iyo martida ah soo ururiyaan buuxiyo Hase yeshee,, alaabta lagu ciyaaro alwaax, sharraxdid geedka kirismaska, dahabka gacanta lagu dhigay, iyo waxyaabaha udugga leh shumacyada.
Doorashada cuntada iyo sharaabka lagu iibiyo suuqa waa mid aad u deeqsi. Visitors laga yaabaa in weeraryahanka in cuntada dhaqanka Czech eegto sida hilibka doofaarka shiilay, doolshe Czech, conkers, biirka, soo dhaweynayaan, iyo taqasusyo kale ee caadiga ah ka cunnada Czech Old. Waxaa jira wax aad u khaas ah oo ku saabsan suuqa Christmas ah in Prague. na raac on Twitter iyo Facebook si ay isha ku hay for dalabyo ugu dambeeyay.
Ku raaxayso fasax bir ah oo tareenka ku socda ku damaashaada Vienna! Vienna waa magaalo cusb iyo hindiga oo bixiya aad u fiican ee Suuqyada Christmas in Europe. The tareenka waa daqiiqo oo kaliya by taxi ama bas bartamaha magaalada taas oo ka dhigaysa Vienna ee Christmas Suuqyada by tareenka fudud si ay u gaaraan. The ugu caansan suuqa magaalada this qaadataa meel on Rathausplatz, halkaas oo laba jibbaaran si fiican u-shiday by nalalka Laabideeda horteed iyo geedka kirismaska ​​cajiib ah.
Isku day inaad feer ku delicious iyo macmacaanka dhaqanka sida aad eegto ka soo furin golaha ay hakad galeen, waayo, hadiyado iyo qurxinta, sidoo kale fiid kasta riwaayadaha buunka live waxaa lagu sameeyaa ka balakoonka Rathaus ah, tani waa hab fiican si loo soo afjaro maalin kaamil ah.
Samee this mid Christmas ah in la xusuusto oo la booqasho uu ku mid ka mid ah suuqyada Christmas aan caadi ahayn Europe ee tareen. Ballansan tigidhka online isticmaalaya jiheeyaha rakaab iyo ka dhigi kaydka weyn ka hor.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, ka dibna riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-christmas-markets-by-train%2F%3Flang%3Dso - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
#suuqa #newyear #noel Christmas ChristmasbyTrain